‘डिम्पल गर्ल’ प्रितीले बिवाहअघि गरेकी थिइन् यी ५ पुरूषसँग रोमान्स ! – Nayabook
‘डिम्पल गर्ल’ प्रितीले बिवाहअघि गरेकी थिइन् यी ५ पुरूषसँग रोमान्स !
बलिउडकी डिम्पल गर्ल प्रिती जिन्टाले विवाह गरेर आफ्नो घर बसाईसकेकी छिन्। प्रितीले जेन गुडइनफसंग विवाह गरेकी हुन्।
विवाह हुनुभन्दा अगाडी प्रितीको कयौं पुरुष र स्टारहरुसँग नाम जोडियो। विवाह भन्दा अगाडी प्रितीको पाँच व्यक्तिहरुसँग अफेयर रह्यो। जुन निकै चर्चामा समेत रह्यो । हाल प्रितीले फिल्म ‘भैयाजी सुपरहिट’ बाट कमब्याक समेत गरेकी छन् ।
यी हुन् उनका ५ प्रेमी –
यो पनि -रमाइलो भिडियो हेर्न क्लिक गर्नुहोस्……
चलचित्र क्षेत्रमा आउनु भन्दा अगाडी प्रितीको अफेयर अभिनेता मोडल मार्क रोबिनसनसँग थियो। चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित हुन भन्दा अगाडी प्रितीलाई मोडलिंग प्रोजेक्टहरु दिलाएका थिए। सोहि क्रममा यी दुई नजिकिएका थिए। तर यी दुईको सम्बन्ध बारे हल्ला चल्दा-चल्दै ब्रेकअप हुनपुग्यो।
अभिषेक र प्रितीको अफेयर बारे चर्चा हुँदा धेरै अचम्मित भएका थिए। अनस्क्रिन मात्र नभई अफस्क्रिन पनि यी दुईको केमेस्ट्री त्यसताका राम्रै रह्यो। यी दुईको प्रेम बारे व्यपाक हल्ला हुँदा पनि स्वीकार भने गरेनन्। यी दुई बीच विवाह हुने हल्ला पनि चलेको थियो। तर त्यो हल्ला मै सिमित भयो ।
ठूलै व्यापारीको रुपमा चिनिने नेस वाडियासँग प्रितीको सम्बन्ध सबै भन्दा चर्चित रह्यो। यी दुईले मिडियामै आफ्नो सम्बन्ध स्वीकारेका थिए। पाँच वर्षको प्रेम सम्बन्ध पछि यी दुई छुट्टिएका थिए। बताउने गरिन्छ की नेसले प्रितीलाई थप्पड हा-नेपछि सम्बन्ध बि-ग्रिएको थियो। -एजेन्सीको सहयोगमा